Fructines (ဖရက်တင်းစ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Fructines (ဖရက်တင်းစ်)
Fructines (ဖရက်တင်းစ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Fructines (ဖရက်တင်းစ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Fructines (ဖရက်တင်းစ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Fructines® ကို ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ကုသဖို့ အသုံးပြုနိုင်သလို ခွဲစိတ်မှုအချို့မပြုလုပ်မီ သို့မဟုတ် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းများမပြုလုပ်မီ ဝမ်းချူဖို့အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။Natrium picosulfate ဟာ အူမှာရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေကို ပိုမိုလှုပ်ရှားစေတဲ့အတွက် အညစ်အကြေးတွေကို ခန္ဓါကိုယ်အပြင်ဖက်သို့ ပိုမိုလျင်မြန်စွာ စွန့်ပစ်စေနိုင်ပါတယ်။Fructines® ရဲ့ အာနိသင်ဟာ ၆နာရီကနေ ၁၂နာရီလောက်အထိ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။
Fructines (ဖရက်တင်းစ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Fructines® ကို သောက်ဆေးအဖြစ် သုံးစွဲရမှာဖြစ်ပြီး ဆေးကို ဝါးစားတာ၊ချိုးပစ်တာမျိုးမလုပ်ဘဲ တလုံး လုံးကို သောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးသောက်တဲ့အခါ ရေများများနဲ့ သောက်သင့်ပါတယ်။
Fructines (ဖရက်တင်းစ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
(ယေဘူယျ အသိပေးချက် – ဆေးအများစုမှာ အခန်းအပူချိန်တွင် သိုလှောင်ထားနိုင်ပါတယ်)
Fructines® ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Fructines® ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Fructines® ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Fructines® ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Fructines® ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Fructines (ဖရက်တင်းစ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Fructines® ကို မသုံးစွဲခင် အောက်ပါအချက်တွေရှိရင် သင့်ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
Fructines® သို့မဟုတ် အခြားဆေးများ နှင့် ဓါတ်မတည့်လျှင်။
ကလေးတွေမှာ ဝမ်းနှုတ်ဆေးကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်ရှိမှသာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ မကြာသေးမီက ဗိုက်ခွဲထားလျှင် သို့မဟုတ် အူရောင်ရမ်းသော ရောဂါရှိလျှင်။
သင့်ခန္ဓါကိုယ်မှာ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်နေလျှင် သို့မဟုတ် ဆီးဆေးများ သောက်နေရလျှင်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Fructines (ဖရက်တင်းစ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Fructines (ဖရက်တင်းစ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဒီဆေးကို သုံးစွဲတဲ့အခါ ခံစားရနိုင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့က အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဘယ်ဆေးတွေက Fructines (ဖရက်တင်းစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Fructines® ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Fructines (ဖရက်တင်းစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Fructines® က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Fructines (ဖရက်တင်းစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Fructines® ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။
အူရောင်ရောဂါရှိနေခြင်း (ဥပမာ ulcerative colitis —> အူမကြီးမှာ အနာတွေ ဖြစ်တဲ့ရောဂါတမျိုးဖြစ်ပြီး သွေးဝမ်းမကြာခဏသွားတဲ့ လက္ခဏာပြပါတယ်)။
ဗိုက်ခွဲရန် လိုအပ်သောရောဂါများရှိခြင်း (ဥပမာ အူအတက်ရောင်ခြင်း)။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Fructines (ဖရက်တင်းစ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ ဆေးပြား ၂ပြားမှ ၄ပြားအထိ သောက်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးတောင့်တွေကို သောက်တဲ့အခါ ရေနဲ့သောက်ချပါ။Sodium picosulfate ဟာ အာနိသင်ပြဖို့အတွက် ၆နာရီကနေ ၁၂နာရီလောက်အထိ ကြာမြင့်တဲ့အတွက် ညအိပ်ယာဝင်ချိန်မှာ ဆေးသောက်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Fructines (ဖရက်တင်းစ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Fructines (ဖရက်တင်းစ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Fructines® ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
သောက်ဆေးပြား၊ ဝါးစားနိုင်သော ဆေးပြား၊ Sodium Picosulfate ၅ မီလီဂရမ်။
Fructines® ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Fructines® Uses. http://www.ndrugs.com/?s=Fructines. Accessed December 22,
Sodium picosulfate. http://patient.info/medicine/sodium-picosulfate- dulcolax-pico.
Accessed December 22, 2016
Sodium picosulfate. http://drugs.webmd.boots.com/drugs/drug-435- Sodium-
Picosulfate.aspx. Accessed December 22, 2016.